Halkan ka dhegeyso sheekada Lama Huraan - Radio Ergo
in Hibada iyo hal abbuurka, Madaddaallada Ergo
Ku soo dhawaada sheeko taxane ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolasha Soomaalida, haddii ay noqon lahayd nabadda, bulshada, caafimaadka, waxabarashada, dhaqan celinta, dimuquraadiyadda , dowladda wanaagga iyo dib u dhiska, waxaa soo saaray Radiyihi la oran jiray IRIN oo ahaa wakaaladdii wararaka ee QM u qaabilsan arrimaha bani’aadamnimada.
Magaca sheekada waa lama huraan, waxay ka hadlaysaa burburki ku dhacay qaranwaynihi Soomaaliya kadib dagaalladi sokeeye, ammaan darrada baahday, kala dambayn la’aanta, qaxa, dhaca iyo kufsiga, sheekadu waxay astaan midnimo u soo qaadanaysaa tuulo khayaali oo ay ku magacawday Tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhan kuwada noolaayeen, ayadoo aan dadka la kala xigsanayn, qabiil iyo koox , mana ahayn mid leh ciidan iyo hub, waxayna dadkeedu kuwada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin, tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadki nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto, taasoo sababtay koox dablay ah oo halkaasi waddo ka dhigtay.
Dadki degaanka deganaan u diiday inay si nabad ah u deganaandaan. Dadki Tub- caano ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay u qaxeen oo ay nabad galiyada bideen, waxaana ay bilaabeen inay dib ugu soo noqdaan tuuladoodi si ay nolal cusub halkaa uga billaabaan.
Sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan lama huraanna u tahay, iskaashi, wada jir, walaaltimino , cadaalad iyo isqadarin taasoo keenaysa in dadku hiigsadaan nabad iyo hormar. Haddaba ku soo dhawaada qaybta 16-aad.
IDAACADDA MAANTA, AXAD 03-FEB-2019
IDAACADDA MAANTA, ISNIIN 04-FEB-2019